Puntland oo dil toogasho ah ku fulisay Rag horey dil loogu xukumay.
BOOSAASO(P-TIMES) – Puntland ayaa maanta fulisay xukunka shan qof oo ay maxkamaddaha ciidamadaas ku heleen in ay ahaayeen kooxo katirsan Al- Shabaab & Daacish, sida horey loogu sheegay warbixino laga soo saaray markii ay baaris ku wadeen Xeer Ilaliyaasha Puntland.
Maxkamaddaha kala duwan ee ciidamada Puntland ayaa dilkan xukumay, waxaana la xaqiijiyey in la fuliyey kahor maalintii Khamiista, iyadoo ay dilkan fuliyeen cutub katirsan ciidamada Ammaanka ee Puntland, iyadoo lagu fuliyay magaalada Boosaaso.
Dadka dilkooda la xaqiijiyey in lagu fuliyey ayaa kala ah.
1-Ibraahin Guudow Boorow oo 23 jir ah.
2-Faarax Siciid Faarax oo 19 jir ah.
3-Sheikh Cabdi Cabdulqadir Sheikh oo 22 jir ah.
4-Shaafici Xuseen Macalin oo 19 jir ah.
5-Xasan Laamow Aadan oo 39 jir ah.
Ragga la shalay lagu fuliyay dilka toogashada ah ayaa waxaa la sheegay in muddo dheer ay ku xirnaayeen xabsiga dhexe ee magaaladda Boosaaso, kuwaas oo kol hore laga wada qabtay gudaha deegaanada maamulka Puntland.
Maxkamadaha Ciidamada ee Darajadda Koowaad iyo Racfaanka ayaa horay dil ugu xukumay ragaan, waxayna taasi keentay in Maxkamadda ciidamada ee Puntland ay maanta toogasho ku fuliso 5 taas ruux.
Madaxweynaha Puntland ayaa leh saxiixa u dambeeya ee dilka dadka lagu xukumo dilalkan, waxaana ay noqonaysaa markii 1aad ee Madaxweynaha xaafiiska hayaa uu saxiixo in dil lagu fuliyo dad lagu helay in ay dilkooda ka dambeeyeen.